Ice Cream Proteinina 8 be mpividy hividy - Sakafo
Vaovao Momba Ny Lamaody Ao Amin'ny The News Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Amboary Eo Noho Eo Fahasalamana Fironana Anontanio The Expert Hoditra Products Hafa
Ice Cream Proteinina 8 be dia be marika hanomezana fahafaham-po ny filanao tsindrin-tsakafo
Mety aminao ve ny gilasy? Tsara ho anao izany fanahinao manontolo . Saingy feno siramamy sy tavy ihany koa izy, ary bebe kokoa amin'ny fitsaboana tsindraindray noho ny foto-tsakafon'ny sakafo. Fa ny teny filamatray dia ny antonony rehetra, ary tsy manapaka ny sokajy avy amin'ny sakafonao mihitsy, maninona raha mitady famporisihana ao amin'ny proteinina departemanta? Macronutrient tena ilaina amin'ny fananganana sy fanamboarana ny hozatra ary manampy ny vatanao hamokatra hormonina manan-danja, miampy anao mahafa-po anao ary afaka manampy sorohana ny fianjerana siramamy . Soa ihany, misy maro avo-proteinina marika gilasy hisafidianana — ireto misy valo hanandramana.
Inona no atao hoe gilasy misy proteinina be?
Azo antoka fa ny ronono, ny ronono ary ny atody dia samy manana proteinina avokoa, fa ahoana ny fomba anaovan'ny gilasy ny sakafo raha be kaloria, siramamy ary tavy? Hafa kely ihany ny gilasy misy proteinina avo lenta:
Misy proteinina fanampiny ao anatiny. Ny gilasy misy proteinina avo lenta dia azo atao amin'ny mahazatra na tsy ronono ronono arakaraka ny marika, fa mazàna dia misy manampy proteinina amin'ny endrika proteinina ronono mifantoka, proteinina whey mifantoka na proteinina miorina amin'ny zavamaniry (toy ireo vita amin'ny pitipoà na soja).
Vita amin'ny ronono ambany tavy izy io. Miankina amin'ny marika ihany koa izany, fa satria maro ihany koa ny gilasy misy proteinina avo lenta na ambany kaloria, matetika dia vita amin'ny ronono skim fa tsy manontolo.
Mamy miaraka amin'ny mpisolo siramamy. Marika marikivy misy proteinina marobe koa no miova siramamy ho an'ny safidy kaloria ambany sy tsy misy siramamy ho an'ny mamy, toy ny stevia, erythritol, ny voankazo moanina ary ny glycerine legioma. Tsy misy fiantraikany amin'ny atin'ny proteinina izany, fa mampihena ny atin'ny siramamy amin'ny paompy.
Mifandraika: Hevitra fisakafoanana-maraina proteinina avo lenta izay hitazona anao ho feno ’Til Lunchtime
sarimihetsika manentana amin'ny amazon prime
Ice cream misy Proteinina 8 be hanandrana
1. Salama Top
Sakafo isaky ny kapoaka:: kaloria 100, proteinina 6g, tavy 2g, karbaona 21g, siramamy 7g
Fantatra noho ny antony marobe i Halo Top: fonosana proteinina 20 grama isaky ny pint no amboarany ao, nefa mbola ambany kal. Izany dia noho ny ronono skim ultrafiltered, izay namboarina mba hanala lactose sy rano, mifantoka ny molekiola proteinina. Na eo aza ny mari-pamantarana mahasalama azy, ny Halo Top dia nahaliana ny famolavolana tsiro be dia be sy mamorona — mieritrereta mofomamy sokay, carchi macchiato, s'mores ary caramel sira an-dranomasina ho fanampin'ny tsiro nentin-drazana.
Matsiro hanandrana: Blueberry Crumble
2. Arctic Zero
Sakafo isaky ny kapoaka:: kaloria 50, proteinina 2g, tavy 0g, karbôgy 11g, siramamy 8g
Ny pintsan'ny proteinina avo lenta an'ny Artic Zero dia tsy ronono ary vita amin'ny a miorina amin'ny zavamaniry faba bean proteinina mifantoka, noho izany dia keto-friendly, glycemie ambany izy ireo SY vegan. Ny tsipika tsiro — izay misy ny tiana mahazatra toa ny lavanila, mint, koba mofomamy ary sakamalao sôkôla cherry — dia ankamaroan'ny voanjo, voanjo ary tsy misy soja ihany koa. (Zahao fotsiny ny marika amin'ilay tsiro nofidianao aloha.)
Matsiro hanandrana: Pistachio
3. Ice Cream Mazava
Sakafo isaky ny kapoaka:: kaloria 100, proteinina 7g, tavy 3g, karbôla 20g, siramamy 5g
Raha ny Enlightened vao haingana kosa dia nandefa fifantina keto gilasy , ny marika O.G. tsipika ambany kaloria dia foto-tsaka misy proteinina avo. tsirairay pint misy kaloria 280 ka hatramin'ny 400 ary proteinina 20 ka hatramin'ny 24 grama (arakaraka ny tsirony) ary ny tsindrin-tsakafo mangatsiaka dia vita amin'ny proteinina ronono mifantoka. Izy io koa dia misy siramamy 60 ka hatramin'ny 80 isan-jato kely kokoa noho ny gilasy nentim-paharazana ary misy tsiro mahafinaritra toy ny labiera mangatsiaka kafe ary dibera voanjo marshmallow.
Matsiro hanandrana: Dibera sôkôla
Afaka maimaim-poana amin'ny ronono
4. Jiro tsy misy ronono matsiro tokoa
Sakafo isaky ny kapoaka: kapoaka: kaloria 110, proteinina 1g, 5g matavy, karbaona 20g, siramamy 6g
Raha tsy mihinana ronono ianao, dia mbola afaka mandray anjara amin'ny sotrok'ity safidy proteinina avo lenta ity, izay vita amin'ny proteinina pea sy menaka voanio. Na dia misy tsiro roa fotsiny aza amin'izao fotoana izao (dibera voanjo sy sôkôla) dia samy manana kaloria 330 isaky ny litatra fotsiny izy ireo. Ary na dia tsy misy proteinina saika ny marika aza ny paikan'ny So Delicious, dia entin'ny ambany-matavy sy karbaona ambany lafin-javatra.
manala volo fanampiny amin'ny tarehy
Matsiro hanandrana: Totom-boanjo
5. Omby mahia
Sakafo isaky ny sakafo: kaloria 170, proteinina 3g, tavy 5g, karbaona 28g, siramamy 14g
Ny tsindrin-tsakafo mangatsiaka mangatsiaka dia tsy ilay ambony indrindra amin'ny proteinina amin'ity lisitra ity, saingy mbola manangona totohondry ihany izy ireo (miampy, ambany kokoa ny tavy sy kaloria noho ny gilasy mahazatra). Ny gilasy maivana dia vita amin'ny fifangaroan'ny ronono, fanosotra ary, mahagaga, dibera . Tianay indrindra ireo cone nostalgia.
Matsiro hanandrana: Cones vanilla caramel ambaratonga manaraka
6. Snow Monkey
Sakafo isaky ny sakafo: kaloria 150, proteinina 7g, tavy 4g, karbaona 25g, siramamy 17g
Ny paingadin'i Snow Monkey dia miorina amin'ny zavamaniry, tsy misy alergia ary sariaka paleo, ankoatry ny maha-izy azy be proteinina . (Ny marika dia natsangan'ny atleta vehivavy.) Ary raha tokony hiantehitra amin'ny fomba fanolo ny ronono dia namboarina avy ny tsiro voankazo vovoka proteinina manadio sy hemp ary mamy amin'ny syrup amin'ny maple.
torohevitra fitomboan'ny volo haingana ao an-trano
Matsiro hanandrana: frezy
7. Bara Yogurt Greek Yasso Frozen
Sakafo isaky ny sakafo: kaloria 100, proteinina 5g, tavy .5g, carb 18g, siramamy 16g
Raha tokony ho paompy, Yasso dia manamboatra karazana gilasy isan-karazany (toy ny sandwich sy ny fihinana atsoboka sôkôla) miaraka amin'ny yaourt grika ho fotony. Izany dia satria voajanahary be proteinina miaraka amina endrika manankarena sy mamy. Ny tsindrin-tsindrin-tsakafo tsirairay an'ny marika dia kaloria 100 na latsaka dia misy proteinina 4 ka hatramin'ny 6 grama avy amin'ny proteinina ronono mifangaro, miaraka amin'ny tsiro toy ny butter pecan sy cookies ary crème.
Matsiro hanandrana: Caramel sira an-dranomasina
8. Keto Pint
Sakafo isaky ny kapoaka:: kaloria 190, proteinina 4g, tavy 16g, karbona 18g, siramamy 1g
Tsy mila manaraka ny sakafo keto ianao raha te hankafy ny tombony azo avy amin'ny proteinina avo lenta amin'ity marika gilasy ketogenika ity. (Ataovy ao an-tsaina anefa fa midika izany fa be kaloria sy matavy izy io noho ny safidin'ny gilasy maivana.) Keto Pint dia mampiasa ronono an-toerana mba hamolavolana ny gilasy, izay misy amin'ny tsiro nentim-paharazana, toy ny koba sôkôla cookie, kafe sy frezy . Ny tsirairay dia mamy amin'ny erythritol, voankazo moanina ary stevia, ary ny fotony dia fifangaroan'ny crème, rano, atody atody ary proteinina ronono.
Matsiro hanandrana: Raspberry mainty
ny fomba hifehezana ny fahalavoan'ny volo mafy
Mifandraika: Fomba 14 hanaovana gilasy tsy misy mpanao gilasy
Sokajy Fanafody An-Trano Lamaody Mpanambady Ao An-Tokantrano
Zavamaniry anatiny sy ivelany izay mandroaka ny sigara
Ahoana ny fomba hampihenana ny Jeans ka mifanaraka amin'ny fonon-tanana izy ireo
Ny pisinin'ny NYC dia azonao atao ny milomano amin'ny ankavanana amin'ity faharoa ity
Jery ​​15 izay manaporofo ny akanjon'ny renin'i Macy an'ny mpampakatra dia mora sy mahomby
Ahoana no fomba hahatongavana ho mpahandro tsara kokoa ao anatin'ny 30 andro
Ny fianakavian'i Danemarka fianakaviana… Fahagagana mahagaga. Ity ny zavatra rehetra fantatsika momba azy ireo
Firavaka Perla 19 hovidiana izao, manomboka amin'ny $ 24 fotsiny
Reny 2 aho, ary ity no drafi-pisakafoanana kobanina 2 herinandro
Seho amin'ny fahitalavitra Binge-mendrika 50 sy ny toerana hijerena azy ireo
Ny taovolo 50 tsara indrindra ho an'ny vehivavy amin'ny 2021
Ahoana ny fomba fanapahana ny mananasy amin'ny fomba 3 samy hafa
Baskety 10 Premade izay mamonjy anao amin'ny fotoana (sy ezaka) manontolo.
Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy
Sarin-tànana efijery 5 avy amin'ny Amazon izay miasa tokoa
Ireo toerana 7 misy ahiahy indrindra any Etazonia Tianay hotsidihinay izahay
Pranet Pahwa 9 taona dia namorona fampiharana hanamorana ny fahasalamana
Fanomezana 26 homena ny namanao akaiky indrindra amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity
Channing Tatum dia lasa feno Zac Efron ary nametaveta ny volony
fanafody an-trano amin'ny fitomboan'ny volo
sarimihetsika mampihetsi-po mampihetsi-po
fitsaboana voajanahary voajanahary ho an'ny fitomboan'ny volo
zavatra hatao amin'ny andro krismasy
fampiasana vovo-fanaova ho an'ny hoditra